ဆယ်တန်း မဖြေနိုင်လို့ မအောင်တာနဲ့ ဘ၀ကြီးစုတ်ပြတ်သွားပြီလို့ ထင်တယ်ဆိုတဲ့ သူတွေ ဖတ်ကြည့်ပါ – ရှအေလငျး
ဆယ်တန်း မဖြေနိုင်လို့ မအောင်တာနဲ့ ဘ၀ကြီးစုတ်ပြတ်သွားပြီလို့ ထင်တယ်ဆိုတဲ့ သူတွေ ဖတ်ကြည့်ပါ
မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ရည်ရွယ်ရေးသားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဆယ်တန်းမှာ ကျွန်တော့်လိုပဲ ရိုးရိုးသမာရိုးကျသာဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား/သူများ စိတ်အားတက်ကြွစေရန်အလို့ငှာ ဒီစာကိုရေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်
နောက်ပြီးတော့ ဆယ်တန်းမှာ မအောင်လို့ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ရိုးရိုးအောင်ရင် ဖြစ်စေ ဘဝကြီးကသုံးစားလို့မရတော့ဘူးလို့ ထင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရွှေ မြန်မာတွေရဲ့အမြင်ကို ပြောင်းစေချင်လို့ပါ။ အထူးသဖြင့် ဒီဆောင်းပါးကို ဆရာ၊ ဆရာမတွေ၊ လက်ရှိ မိဘ ဖြစ်နေသူတွေနဲ့ မိဘဖြစ်မယ့်သူ ၊ဘဝကိုတိုးတက်အောင်မြင်လိုသူ တွေ ဖတ်သင့်ပါတယ်နော်
ကျွန်တော် ဆယ်တန်းကို Bio တွဲနဲ့ ၂၀၀၅ခုနှစ်မှာ ဖြေဆိုအောင်မြင်တုန်းက အမှတ် ၄၀ကျော် ၂ဘာသာနဲ့ ကျန်တာ ၅၀ကျော်နဲ့ စုစုပေါင်း ရမှတ် ၃၂၆မှတ် ဖြစ်ပါတယ်။ (အောက်မှာ ဆယ်တန်း အမှတ်စာရင်းတင်ပေးထားပါတယ်။) အဲဒီလို အမှတ်မကောင်းခြင်းတွေကြောင့်ပဲ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ ကျွန်တော် လိုချင်တာတွေနဲ့ ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ Company ၁ခုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ၊ နောက်တစ်ခုမှာ Director အနေနဲ့ ပါထားတဲ့အပြင် ၊ Training Center ၅ခု ကိုလည်း ကိုယ်ပိုင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ပြီး တခြားသော လုပ်ငန်း ၃ခုမှာလည်း Share ဝင်ထားပါသေးတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ထပ်မံချဲ့ထွင်မယ့်အရာတွေ စီစဉ်ထားပါသေးတယ်။ အော်.. မေ့လို့ ချစ်လှစွာသော ဇနီးနဲ့ သားလေးတစ်ယောက်လည်း ပိုင်ထားပါသေးတယ်
ကျွန်တော် အခု အရမ်းမချမ်းသာပါဘူး။ သို့သော် အခု အသက်၃၀မပြည့်ခင်အချိန်မှာပဲ ငွေကြေးအတွက် သိပ်ပူစရာမလိုတဲ့ ဘဝကို ရရှိနိုင်ခဲ့ပြီ။ နောက်ပြီး မသုံး မဖြုန်းပဲနေမယ်ဆိုရင် အေးဆေး တဘဝလုံးစာ ထိုင်စားလို့ရနိုင်တဲ့ ဝင်ငွေရှိခဲ့ပြီ။ ဒါတွေက ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့မှုနဲ့အတူ မိဘတွေရဲ့ အားပေးနှစ်သိမ့် လမ်းပြမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ပြောရမယ်ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂နှစ်ကျော်ကာလ အခုလိုအချိန်မှာ ကျွန်တော် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို အသည်းအသန်ဖြေဆိုခဲ့ရတဲ့ကာလပေါ့။ အသည်းအသန်ဆိုလို့ အထင်ကြီးမသွားကြပါနဲ့အုံး…. သူများလို ဂုဏ်ထူးတွေပါဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးရိုးလေး အောင်ဖို့ မနည်းကြိုးစားခဲ့ရတဲ့အချိန်ပေါ့
မှတ်မှတ်ရရ ဆယ်တန်းဖြေခါနီး ၂လ/၃လ လောက်အလိုမှာ ညဘက် လုံးဝ အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါတစ်ခုရခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ အဲဒီရောဂါရလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာအသိဆုံးပါ။ ဆယ်တန်းဖြေခါနီးနေပြီ ဘာစာတစ်လုံးမှမရလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ အဖေနဲ့အမေတိုင်ပင်ပြီး ရန်ကုန်က ဆရာဝန်တွေဆီကို ဆေးခန်းသွားပြတာ ဖြေခါနီးမှပဲ ပြန်ရောက်လာတယ်။ (မှတ်ချက်။ ကျွန်တော်က ဆယ်တန်းအထိ ပဲခူးတိုင်း ၊ မင်းလှမှာ ကျောင်တက်ခဲ့တာပါ။)
ဖြေခါနီးမှနယ်ကို ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာတယ်။ နောက်ဆုံးဆယ်တန်းသာ သွားဖြေတာ မြန်မာစာက ကဗျာ ၅ပုဒ် ၊ စကားပြေ ၅ပုဒ်ပဲရပါတယ်။ English စာဆိုလည်း တဝက်လောက်ပဲသင်လို့ပြီးတယ်။ Essay , Letter ဆိုရင် တသက်လုံး ရေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ သချာင်္ဆိုရင် Chapter7Probability အထိပဲ သင်ခံခဲ့ရတယ်။ အဲ့နောက်ပိုင်းဘာမှမသိခဲ့ပါဘူး။
Physics နဲ့ Chemistry ကလည်း အကုန်အသင်မခံခဲ့ရဘူး။ Bio ကျတော့ အမေလိုချစ်ရတဲ့ဆရာမက အတင်းတိုက်တွန်းပြီး ကျတ်ခိုင်းလို့ ၆၇မှတ်ရခဲ့တယ်ဆိုပါတော့လေ။ အားလုံးက ကျွန်တော့် အပြစ်တွေပါပဲ။ နှစ်စကတည်းက စာတွေကို လုံးဝမလုပ်ခဲ့သလို နှစ်လယ် နဲ့ နှစ်ဆုံးမှာလည်း မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျူရှင်ပြေးခဲ့တာတွေလည်း ပါတာပေါ့လေ
တကယ်တမ်းဖြေမယ်လုပ်တော့ ကြောက်ပြီး မဖြေရဲတော့ဘဲ ရောဂါထဖြစ်တာပါပဲ။ အဖေ နဲ့အမေ လည်း ကျွန်တော့်အတွက်နဲ့ တော်တော် ဒုက္ခရောက် ခဲ့ကြရပါတယ်။ ကျူရှင်ဆိုလည်း one by one သေချာ ရှယ်ထားပေးခဲ့တာပါ။ သို့သော် ကျွန်တော်ငယ်၂တုန်းက စာနဲ့ပတ်သက်ရင် အသုံးမကျခဲ့ပါဘူး။ အသုံးမကျတာထက်စာရင် ၏ ၊ သည်မရွေး ကျတ်တူရွေးစာရွတ်သလို ရွတ်ပြီး ချရေးရတဲ့စနစ်ကို မကြိုက်တာဆိုရင်တော့ ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်
ဒီလိုနဲ့ ဆယ်တန်းဖြေနေတုန်း ကျွန်တော့် အဖေ နဲ့ အမေကို ကျွန်တော် မေးတယ်။ ကျွန်တော် မေးလိုက်တာက “ဆယ်တန်းမအောင်ဘဲ ကျရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ?” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အဖေက ချက်ခြင်းဖြေတယ်။ “သားက အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးသာဖြေပါ။ ကျတာ ၊ အောင်တာက ကိစ္စမရှိဘူး။ တကယ်လို့ကျခဲ့ရင်လည်း နောက်နှစ်ပြန်ဖြေလို့ရတာပဲ” တဲ့။
သို့သော် ကျွန်တော် အဲဒီနှစ်မှာပဲ ဆယ်တစ်ကို တစ်နှစ်ထဲနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ရိုးရိုးအောင်တာကိုပဲ ကျွန်တော့်မိဘတွေက ကြံဖန်ပြီး ဂုဏ်ယူပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ တချို့မိဘတွေ ၃ဘာသာပဲ D ထွက်လို့ ရိုက်ကြ ၊ ဆူကြ 5D ထွက်ပြီး All D မထွက်လို့ဆူရတာနဲ့ All D တော့ထွက်ပါရဲ့ အမှတ်နည်းလို့ ဖြစ်ရပြန်တယ်
တကယ်တမ်း ကလေးတစ်ယောက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော် အမြဲတမ်းပြောသလိုပဲ စာအုပ်ထဲကစာတွေကို ၏ ၊ သည် မရွေးကျတ်ပြီး စာအုပ်ထဲကို တစ်လုံးမကျန်ရေးနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတစ်ယောက် အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာက သူဝါသနာပါတဲ့ အရာတွေ နဲ့ ဖြစ်ချင်တာ တွေ ၊ လုပ်ချင်တာတွေကို မိဘက နောက်ကနေပံပိုးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်
အဲဒီလိုနဲ့ အောင်စာရင်းတွေထွက်တော့ D တစ်လုံးမှ မထွက်တဲ့ ကျွန်တော်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မတွေ့ရဲခဲ့ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့။ စိတ်ထဲမှာ ရှက်မိသလို ဝမ်းနည်း အားငယ်သလိုလိုကြီးခံစားရတယ်။ ဒါတောင် မိဘက ဘာမှမပြောပဲ ကူညီအားပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်နေလို့ပါ။ တချို့ဆို “နင်က အသုံးမှမကျတာ ၊ သူများတွေ D ပါတယ်။ နင်က မပါဘူး။” စသည်ဖြင့် ဆူပူတတ်ကြပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာကန်တော့ပွဲတွေလည်း ကျွန်တော် ရှက်လို့ မသွားရဲခဲ့ပါဘူး
အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော် အခုလိုဖြစ်အောင် အားပေးကူညီခဲ့သူကတော့ အဖေ နဲ့ အမေပါပဲ။ သူတို့က ပြောတယ်။ “သားလေး ဆယ်တန်း မအောင်ပဲ အောင်မြင် ချမ်းသာနေတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ သားက ဆယ်တန်းတောင် အောင်နေပြီပဲ။ ဘာလို့ ရှက်နေရမှာလဲ ။ ဘာလို့ ဝမ်းနည်းရမှာလဲ။ အခုဆယ်တန်းအောင်ပြီဆိုမှတော့ သားလုပ်ချင်တာတွေ စပြီး လုပ်လို့ရနေပြီလေ။
သူများတွေ ကျောင်း ၅နှစ် ၊ ၆နှစ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ သားက အဝေးသင်တက်ပြီး သားဝါသနာပါတာတွေကို လုပ်လို့ရပြီလေ” လို့ အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်
အဲဒီ အားပေးစကားတွေကြောင့်ပဲ ကျွန်တော် ဒီနေ့လို အခြေအနေကို ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် အခု အရမ်းမချမ်းသာပါဘူး။ သို့သော် အခု အသက်၃၀မပြည့်ခင်အချိန်မှာပဲ ငွေကြေးအတွက် သိပ်ပူစရာမလိုတဲ့ ဘဝကို ရရှိနိုင်ခဲ့ပြီ။ နောက်ပြီး မသုံး မဖြုန်းပဲနေမယ်ဆိုရင် အေးဆေး တဘဝလုံးစာ ထိုင်စားလို့ရနိုင်တဲ့ ဝင်ငွေရှိခဲ့ပြီ။ ဒါတွေက ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့မှုနဲ့အတူ မိဘတွေရဲ့ အားပေးနှစ်သိမ့် လမ်းပြမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဆယ်တန်းကို အရေးမပါဘူးလို့ ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဆယ်တန်းသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအရေးပါတယ်။ သို့သော် ဆယ်တန်းက ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ဆိုတာ ဘဝရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်တန်း မဖြေနိုင်တာနဲ့ပဲ ဘဝကြီး စုတ်ပြတ်သွားပြီလို့ ထင်နေတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ အတွေး အမြင်တွေကို ပြင်စေချင်တာပါ။ မအောင်ရင် ပြန်ဖြေပါ။ အချိန် ၁နှစ်နောက်ကျသွားတာက လွဲပြီး ဘာမှဖြစ်မသွားပါဘူး။ ရိုးရိုးအောင်ခဲ့ရင်လည်း ကျေနပ်ပါ။ ထပ်မံကြိုးစားပါ
မိဘတွေအနေဲ့ ကလေးတွေကို အတင်းဖိအားမပေးပါနဲ့။ ကလေး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် Talent နဲ့ IQ တွေက မတူညီကြပါဘူး။ တချို့က စာတော်မယ်။ တချို့က အဆိုတော်မယ်။ တချို့က အက တော်မယ်။ တချို့က ဘောလုံးကန်တာတော်မယ်။ သူတို့ တော်တာကို ကူညီပံပိုးပေးရမှာက မိဘတွေရဲ့တာဝန်ပါ။ စာကိုတော့ သူတို့ ဖတ်နိုင်သလောက်ပဲ ဖတ်ကြပစေ… ဒါမှ သူတို့သည် သူတို့ဝါသနာပါတဲ့အရာမှာ အောင်မြင်ထူးချွန်တဲ့ သူတွေဖြစ်နိုင်ကြမှာပါ
ဒါ့ကြောင့် ဆယ်တန်းမှာ ရိုးရိုး သာမာန်ပဲ အောင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုပြော ချင်တာကတော့ ဘယ်တော့မှ အားမငယ်ပါနဲ့။ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ဘဝကို အရှုံးမပေးပါနဲ့။ ဆယ်တန်းဆိုတာ ဘဝကြီးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။
ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလေးပါပဲ။ ဘဝမှာ ဆယ်တန်းထက် အရေးပါ တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသလို သင့်အနေနဲ့ အပြင်လောကမှာ ကြိုးစားနိုင်ရင် ကြိုးစားသလောက်ရမယ့် အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးရှိသေးတယ် ဆိုတာကိုလည်း သိစေချင်ပါတယ်။ ကဲ…စာတော်တော်ရှည်သွားပြီမို့ ဒီမှာပဲ နားလိုက်ပါတော့မယ်နော်
အားလုံးပဲ အောင်မြင်တိုးတက် ကြီးပွားချမ်းသာကြပါစေနော်
ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Like & See First လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Via– Phyo Arkar
မညျသူတဈဦးတဈယောကျကိုမှ ရညျရှယျရေးသားခွငျးမဟုတျဘဲ ဆယျတနျးမှာ ကြှနျတေျာ့လိုပဲ ရိုးရိုးသမာရိုးကသြာဖွနေိုငျခဲ့တဲ့ ကြောငျးသား/သူမြား စိတျအားတကျကွှစရေနျအလို့ငှာ ဒီစာကိုရေးလိုကျရခွငျးဖွဈပါတယျ
နောကျပွီးတော့ ဆယျတနျးမှာ မအောငျလို့ဖွဈစေ သို့မဟုတျ ရိုးရိုးအောငျရငျ ဖွဈစေ ဘဝကွီးကသုံးစားလို့မရတော့ဘူးလို့ ထငျနတေဲ့ ကြှနျတျောတို့ ရှေ မွနျမာတှရေဲ့အမွငျကို ပွောငျးစခေငျြလို့ပါ။ အထူးသဖွငျ့ ဒီဆောငျးပါးကို ဆရာ၊ ဆရာမတှေ၊ လကျရှိ မိဘ ဖွဈနသေူတှနေဲ့ မိဘဖွဈမယျ့သူ ၊ဘဝကိုတိုးတကျအောငျမွငျလိုသူ တှေ ဖတျသငျ့ပါတယျနျော
ကြှနျတျော ဆယျတနျးကို Bio တှဲနဲ့ ၂၀၀၅ခုနှဈမှာ ဖွဆေိုအောငျမွငျတုနျးက အမှတျ ၄၀ကြျော ၂ဘာသာနဲ့ ကနျြတာ ၅၀ကြျောနဲ့ စုစုပေါငျး ရမှတျ ၃၂၆မှတျ ဖွဈပါတယျ။ (အောကျမှာ ဆယျတနျး အမှတျစာရငျးတငျပေးထားပါတယျ။) အဲဒီလို အမှတျမကောငျးခွငျးတှကွေောငျ့ပဲ ကြှနျတေျာ့ဘဝမှာ ကြှနျတျော လိုခငျြတာတှနေဲ့ ဖွဈခငျြတာတှဖွေဈခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။
လကျရှိ Company ၁ခုပိုငျဆိုငျထားပွီး ၊ နောကျတဈခုမှာ Director အနနေဲ့ ပါထားတဲ့အပွငျ ၊ Training Center ၅ခု ကိုလညျး ကိုယျပိုငျလုပျနိုငျခဲ့တယျ။ နောကျပွီး တခွားသော လုပျငနျး ၃ခုမှာလညျး Share ဝငျထားပါသေးတယျ။ နောကျထပျလညျး ထပျမံခြဲ့ထှငျမယျ့အရာတှေ စီစဉျထားပါသေးတယျ။ အျော.. မလေို့ ခဈြလှစှာသော ဇနီးနဲ့ သားလေးတဈယောကျလညျး ပိုငျထားပါသေးတယျ
ကြှနျတျော အခု အရမျးမခမျြးသာပါဘူး။ သို့သျော အခု အသကျ၃၀မပွညျ့ခငျအခြိနျမှာပဲ ငှကွေေးအတှကျ သိပျပူစရာမလိုတဲ့ ဘဝကို ရရှိနိုငျခဲ့ပွီ။ နောကျပွီး မသုံး မဖွုနျးပဲနမေယျဆိုရငျ အေးဆေး တဘဝလုံးစာ ထိုငျစားလို့ရနိုငျတဲ့ ဝငျငှရှေိခဲ့ပွီ။ ဒါတှကေ ကိုယျတိုငျကွိုးစားခဲ့မှုနဲ့အတူ မိဘတှရေဲ့ အားပေးနှဈသိမျ့ လမျးပွမှုတှကွေောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ
ပွောရမယျဆိုရငျ လှနျခဲ့တဲ့ ၁၂နှဈကြျောကာလ အခုလိုအခြိနျမှာ ကြှနျတျော ဆယျတနျးစာမေးပှဲကို အသညျးအသနျဖွဆေိုခဲ့ရတဲ့ကာလပေါ့။ အသညျးအသနျဆိုလို့ အထငျကွီးမသှားကွပါနဲ့အုံး…. သူမြားလို ဂုဏျထူးတှပေါဖို့ မဟုတျပါဘူး။ ရိုးရိုးလေး အောငျဖို့ မနညျးကွိုးစားခဲ့ရတဲ့အခြိနျပေါ့
မှတျမှတျရရ ဆယျတနျးဖွခေါနီး ၂လ/၃လ လောကျအလိုမှာ ညဘကျ လုံးဝ အိပျမပြျောတဲ့ရောဂါတဈခုရခဲ့တယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲ အဲဒီရောဂါရလဲဆိုတာ ကိုယျ့ဘာသာအသိဆုံးပါ။ ဆယျတနျးဖွခေါနီးနပွေီ ဘာစာတဈလုံးမှမရလို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒါနဲ့ပဲ အဖနေဲ့အမတေိုငျပငျပွီး ရနျကုနျက ဆရာဝနျတှဆေီကို ဆေးခနျးသှားပွတာ ဖွခေါနီးမှပဲ ပွနျရောကျလာတယျ။ (မှတျခကျြ။ ကြှနျတျောက ဆယျတနျးအထိ ပဲခူးတိုငျး ၊ မငျးလှမှာ ကြောငျတကျခဲ့တာပါ။)
ဖွခေါနီးမှနယျကို ကြှနျတျောပွနျရောကျလာတယျ။ နောကျဆုံးဆယျတနျးသာ သှားဖွတော မွနျမာစာက ကဗြာ ၅ပုဒျ ၊ စကားပွေ ၅ပုဒျပဲရပါတယျ။ English စာဆိုလညျး တဝကျလောကျပဲသငျလို့ပွီးတယျ။ Essay , Letter ဆိုရငျ တသကျလုံး ရေးခဲ့တာမဟုတျဘူး။ မှတျမှတျရရ သခြာင်ျဆိုရငျ Chapter7Probability အထိပဲ သငျခံခဲ့ရတယျ။ အဲ့နောကျပိုငျးဘာမှမသိခဲ့ပါဘူး။
Physics နဲ့ Chemistry ကလညျး အကုနျအသငျမခံခဲ့ရဘူး။ Bio ကတြော့ အမလေိုခဈြရတဲ့ဆရာမက အတငျးတိုကျတှနျးပွီး ကတျြခိုငျးလို့ ၆၇မှတျရခဲ့တယျဆိုပါတော့လေ။ အားလုံးက ကြှနျတေျာ့ အပွဈတှပေါပဲ။ နှဈစကတညျးက စာတှကေို လုံးဝမလုပျခဲ့သလို နှဈလယျ နဲ့ နှဈဆုံးမှာလညျး မလုပျခဲ့ပါဘူး။ ကြူရှငျပွေးခဲ့တာတှလေညျး ပါတာပေါ့လေ
တကယျတမျးဖွမေယျလုပျတော့ ကွောကျပွီး မဖွရေဲတော့ဘဲ ရောဂါထဖွဈတာပါပဲ။ အဖေ နဲ့အမေ လညျး ကြှနျတေျာ့အတှကျနဲ့ တျောတျော ဒုက်ခရောကျ ခဲ့ကွရပါတယျ။ ကြူရှငျဆိုလညျး one by one သခြော ရှယျထားပေးခဲ့တာပါ။ သို့သျော ကြှနျတျောငယျ၂တုနျးက စာနဲ့ပတျသကျရငျ အသုံးမကခြဲ့ပါဘူး။ အသုံးမကတြာထကျစာရငျ ၏ ၊ သညျမရှေး ကတျြတူရှေးစာရှတျသလို ရှတျပွီး ခရြေးရတဲ့စနဈကို မကွိုကျတာဆိုရငျတော့ ပိုမှနျပါလိမျ့မယျ
ဒီလိုနဲ့ ဆယျတနျးဖွနေတေုနျး ကြှနျတေျာ့ အဖေ နဲ့ အမကေို ကြှနျတျော မေးတယျ။ ကြှနျတျော မေးလိုကျတာက “ဆယျတနျးမအောငျဘဲ ကရြငျ ဘယျလို လုပျမလဲ?” ပဲဖွဈပါတယျ။ အဲဒီမှာ အဖကေ ခကျြခွငျးဖွတေယျ။ “သားက အတတျနိုငျဆုံးကွိုးစားပွီးသာဖွပေါ။ ကတြာ ၊ အောငျတာက ကိစ်စမရှိဘူး။ တကယျလို့ကခြဲ့ရငျလညျး နောကျနှဈပွနျဖွလေို့ရတာပဲ” တဲ့။
သို့သျော ကြှနျတျော အဲဒီနှဈမှာပဲ ဆယျတဈကို တဈနှဈထဲနဲ့အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျော ရိုးရိုးအောငျတာကိုပဲ ကြှနျတေျာ့မိဘတှကေ ကွံဖနျပွီး ဂုဏျယူပေးခဲ့ကွပါသေးတယျ။ တခြို့မိဘတှေ ၃ဘာသာပဲ D ထှကျလို့ ရိုကျကွ ၊ ဆူကွ 5D ထှကျပွီး All D မထှကျလို့ဆူရတာနဲ့ All D တော့ထှကျပါရဲ့ အမှတျနညျးလို့ ဖွဈရပွနျတယျ
တကယျတမျး ကလေးတဈယောကျအောငျမွငျဖို့ဆိုတာ ကြှနျတျော အမွဲတမျးပွောသလိုပဲ စာအုပျထဲကစာတှကေို ၏ ၊ သညျ မရှေးကတျြပွီး စာအုပျထဲကို တဈလုံးမကနျြရေးနိုငျတာမြိုးမဟုတျပါဘူး။ ကလေးတဈယောကျ အောငျမွငျဖို့ဆိုတာက သူဝါသနာပါတဲ့ အရာတှေ နဲ့ ဖွဈခငျြတာ တှေ ၊ လုပျခငျြတာတှကေို မိဘက နောကျကနပေံပိုးပေးရတာဖွဈပါတယျ
အဲဒီလိုနဲ့ အောငျစာရငျးတှထှေကျတော့ D တဈလုံးမှ မထှကျတဲ့ ကြှနျတျောက သူငယျခငျြးတှနေဲ့ မတှရေဲ့ခဲ့ပါဘူး။ အကွောငျးကတော့ သိတဲ့အတိုငျးပဲပေါ့။ စိတျထဲမှာ ရှကျမိသလို ဝမျးနညျး အားငယျသလိုလိုကွီးခံစားရတယျ။ ဒါတောငျ မိဘက ဘာမှမပွောပဲ ကူညီအားပေးတတျတဲ့သူဖွဈနလေို့ပါ။ တခြို့ဆို “နငျက အသုံးမှမကတြာ ၊ သူမြားတှေ D ပါတယျ။ နငျက မပါဘူး။” စသညျဖွငျ့ ဆူပူတတျကွပါသေးတယျ။ ပွီးတော့ ဆရာကနျတော့ပှဲတှလေညျး ကြှနျတျော ရှကျလို့ မသှားရဲခဲ့ပါဘူး
အဲဒီအခြိနျမှာ ကြှနျတျော အခုလိုဖွဈအောငျ အားပေးကူညီခဲ့သူကတော့ အဖေ နဲ့ အမပေါပဲ။ သူတို့က ပွောတယျ။ “သားလေး ဆယျတနျး မအောငျပဲ အောငျမွငျ ခမျြးသာနတေဲ့သူတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။ သားက ဆယျတနျးတောငျ အောငျနပွေီပဲ။ ဘာလို့ ရှကျနရေမှာလဲ ။ ဘာလို့ ဝမျးနညျးရမှာလဲ။ အခုဆယျတနျးအောငျပွီဆိုမှတော့ သားလုပျခငျြတာတှေ စပွီး လုပျလို့ရနပွေီလေ။
သူမြားတှေ ကြောငျး ၅နှဈ ၊ ၆နှဈတကျနတေဲ့အခြိနျမှာ သားက အဝေးသငျတကျပွီး သားဝါသနာပါတာတှကေို လုပျလို့ရပွီလေ” လို့ အားပေးနှဈသိမျ့ခဲ့ပါတယျ
အဲဒီ အားပေးစကားတှကွေောငျ့ပဲ ကြှနျတျော ဒီနလေို့ အခွအေနကေို ရောကျခဲ့ရပါတယျ။ ကြှနျတျော အခု အရမျးမခမျြးသာပါဘူး။ သို့သျော အခု အသကျ၃၀မပွညျ့ခငျအခြိနျမှာပဲ ငှကွေေးအတှကျ သိပျပူစရာမလိုတဲ့ ဘဝကို ရရှိနိုငျခဲ့ပွီ။ နောကျပွီး မသုံး မဖွုနျးပဲနမေယျဆိုရငျ အေးဆေး တဘဝလုံးစာ ထိုငျစားလို့ရနိုငျတဲ့ ဝငျငှရှေိခဲ့ပွီ။ ဒါတှကေ ကိုယျတိုငျကွိုးစားခဲ့မှုနဲ့အတူ မိဘတှရေဲ့ အားပေးနှဈသိမျ့ လမျးပွမှုတှကွေောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ
ကြှနျတျောပွောခငျြတာက ဆယျတနျးကို အရေးမပါဘူးလို့ ပွောခငျြတာမဟုတျဘူးနျော။ ဆယျတနျးသညျ အတိုငျးအတာတဈခုအထိအရေးပါတယျ။ သို့သျော ဆယျတနျးက ဘဝကွီးတဈခုလုံးမဟုတျပါဘူး။ ဆယျတနျးစာမေးပှဲ ဆိုတာ ဘဝရဲ့ တဈစိတျတဈပိုငျးပဲဖွဈပါတယျ။ ဆယျတနျး မဖွနေိုငျတာနဲ့ပဲ ဘဝကွီး စုတျပွတျသှားပွီလို့ ထငျနတေဲ့ မွနျမာတှရေဲ့ အတှေး အမွငျတှကေို ပွငျစခေငျြတာပါ။ မအောငျရငျ ပွနျဖွပေါ။ အခြိနျ ၁နှဈနောကျကသြှားတာက လှဲပွီး ဘာမှဖွဈမသှားပါဘူး။ ရိုးရိုးအောငျခဲ့ရငျလညျး ကနြေပျပါ။ ထပျမံကွိုးစားပါ
မိဘတှအေနေဲ့ ကလေးတှကေို အတငျးဖိအားမပေးပါနဲ့။ ကလေး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ Talent နဲ့ IQ တှကေ မတူညီကွပါဘူး။ တခြို့က စာတျောမယျ။ တခြို့က အဆိုတျောမယျ။ တခြို့က အက တျောမယျ။ တခြို့က ဘောလုံးကနျတာတျောမယျ။ သူတို့ တျောတာကို ကူညီပံပိုးပေးရမှာက မိဘတှရေဲ့တာဝနျပါ။ စာကိုတော့ သူတို့ ဖတျနိုငျသလောကျပဲ ဖတျကွပစေ… ဒါမှ သူတို့သညျ သူတို့ဝါသနာပါတဲ့အရာမှာ အောငျမွငျထူးခြှနျတဲ့ သူတှဖွေဈနိုငျကွမှာပါ
ဒါ့ကွောငျ့ ဆယျတနျးမှာ ရိုးရိုး သာမာနျပဲ အောငျခဲ့ကွတဲ့သူတှကေိုပွော ခငျြတာကတော့ ဘယျတော့မှ အားမငယျပါနဲ့။ စိတျဓာတျမကပြါနဲ့။ ဘဝကို အရှုံးမပေးပါနဲ့။ ဆယျတနျးဆိုတာ ဘဝကွီးတဈခုမဟုတျပါဘူး။
ဘဝရဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခုလေးပါပဲ။ ဘဝမှာ ဆယျတနျးထကျ အရေးပါ တဲ့အရာတှအေမြားကွီးရှိသလို သငျ့အနနေဲ့ အပွငျလောကမှာ ကွိုးစားနိုငျရငျ ကွိုးစားသလောကျရမယျ့ အခှငျ့အရေးတှေ အမြားကွီးရှိသေးတယျ ဆိုတာကိုလညျး သိစခေငျြပါတယျ။ ကဲ…စာတျောတျောရှညျသှားပွီမို့ ဒီမှာပဲ နားလိုကျပါတော့မယျနျော
အားလုံးပဲ အောငျမွငျတိုးတကျ ကွီးပှားခမျြးသာကွပါစနေျော
ကြှနျတျောရေးတဲ့စာတှကေိုဖတျခငျြတယျဆိုရငျတော့ Like & See First လုပျထားနိုငျပါတယျ။
ဖတ်မိတိုင်း မချိအောင် ရင်နာရတဲ့စာ
ဇက်ကြောတက်တတ်သူတွေအတွက် အထိရောက်ဆုံး ဇက်ကြောဖြေလျှော့နည်း (၅) မျိုး
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏… ခြေဖဝါးတော်တွင် ပါရှိသည့် …(၁၀၈)...
ARMY / KNOWLEDGE အမေရိကန်စစ်သင်္ဘော USS Gerald R.Ford ကို တရုတ်နဲ့ ရုရှားတို...
“အကောင်းဆုံးချန်ပီယံဆုတွေ ဆွတ်ခူးထားသူလေး သက်ထားသူဇာနှင့်...
သင်းသင်းနဲ့အမှုကို သိန်း (၅၀) နဲ့ အာမခံရသွားတဲ့ ဝေဠုကျော်